Ilebula Elimhlophe Delta 8 THC Products | Izintengo ezihamba phambili zango-2021
I-White Label Delta 8 THC Products quantity
Isigaba: I-Wholesale Delta 8 & 10 Products
I-White Label Delta 8 THC Cartridges & Gummies
Ukuhlolwa kwethu kwe-Delta 8 ne-CBD Gummies okususelwa ku-hemp okungaphezu kuka-90% Delta 8 THC noma i-CBD. Amalebula e-Yout aqukethe enye ye-delta 8 cartridges enamandla kunazo zonke etholakalayo namuhla. Siphinde sinikeze amalebula amhlophe kanye namalebula ayimfihlo.
I-Brand Yakho Ilebula i-Delta 8 THC & ne-CBD Gummies
I-Delta 8 THC & CBD gummies yethu okwamanje ihlola ngaphezu kwama-90% we-Delta 8THC/CBD. Okunye okunye yi-CBN ne-CBC. I-ceramic core izungezwe umlomo we-ceramic.
I-Delta 8 kanye ne-CBD Private Labeling and White Labeling Services
Kunezinketho ezimbili zokuthenga
I-Delta 8 & ne-CBD White Labeling
Igama lenkampani yakho lizovela emkhiqizweni. Singakusiza ngokuklama nokufaka uphawu.
I-Delta 8 ne-CBD ilebula yangasese
Thola imikhiqizo yakho, isilungele ukuthengiswa, ngebhrendi yakho ephelele kanye nefomula eyenziwe ngendlela oyifisayo
Yini i-Delta 8 THC?
IDelta 8 iTHC, efana kakhulu ne-Delta 9, iyi-cannabinoid eyenzeka ngokwemvelo. I-Delta 9 THC neCannabidiol D8 ingatholakala kuphela ngamanani amancane.
I-Delta 8 THC Gummy & Cart Precautions
SICELA USEBENZISE NGEMPELA. BONISANA NOMNIKEZI WAKHO WEZIKOLE ZEZIMALI PHAMBI KOKUBA UZISEBENZISE. Umkhiqizo awuhloselwe ukusetshenziselwa ukusebenza noma ukushayela imishini.
Ungawusebenzisi lo mkhiqizo uma ukhulelwe, unesi, noma unesinye isimo sezempilo.
Xhumana nodokotela wakho ngaphambi kokusebenzisa lo mkhiqizo.
Kufanele ube neminyaka engu-21 okungenani ukuthenga noma ukukusebenzisa
Ungase uzwe ukwanda komfutho wegazi kanye/noma ukushaya kwenhliziyo ngenxa I-Delta 8 THC.
Leli khasi lewebhu liqukethe ulwazi lwezemfundo futhi akufanele lithathwe njengeseluleko sezomthetho noma sezokwelapha.
I-White Label Delta 8 THC Legalities
Sikhiqiza i-Delta 8 THC ngokuya ngemithetho yesifunda neyenhlangano. Ayiqukethe ngaphezu kuka-0.3% Delta9 THC. Kuyisibopho sakho ukuqinisekisa ukuthi yonke imithetho iyalandelwa. Ngeke sithumele kunoma iyiphi indawo noma isifunda lapho imithetho yendawo ingqubuzana noMthethosivivinywa Wepulazi wango-2018. Zonke izici zokuthenga kwakho kukuwe.
Imiphumela yesikhathi eside ye-Delta 8 CBD ayifakazelwa. Lawa mazwana ahlinzekelwe ngezinjongo zokwaziswa kuphela.
I-Red Emperor Collective ayinikezi iseluleko sezokwelapha. Ama-cartridge ethu e-vape ane-delta 8 THC awahloselwe ukuxilonga, ukwelapha, ukwelapha, noma ukuvimbela noma yisiphi isifo.
Akukacaci ukuthi i-delta 8 THC metabolites inganikeza amanga ngesikhathi sokuhlolwa kwezidakamizwa okubheka i-delta 9 THC.
Muva nje i-DEA isule imikhiqizo ye-Delta 8 THC ngokumemezela ukuthi AKUMELE INGABE izinto ezilawulwayo. Bona: I-DEA States Ukuthi i-Delta-8 Ayiyona Into Elawulwa Ngokusemthethweni - Umlimi We-Hemp
Abanye abantu m-inqwaba eluhlaza-inqwaba iphelile
Ungayiqala Kanjani Inkampani Yelebula Ezimele ye-CBD Noma Inkampani ye-Delta 8 THC
Kufanele ukhethe umkhiqizo ozokuba wumkhiqizo wakho Welebula Yangasese ukuze uqale ibhizinisi le-CBD. Unenketho yokukhetha ezinhlobonhlobo zemikhiqizo noma wenze eyakho imikhiqizo ye-CBD. Ukuqinisekisa ukuthi imikhiqizo yakho ihlangabezana nezindinganiso zokwaneliseka kwamakhasimende, kunezinto ezimbalwa okufanele uzenze. Kufanele uqale ukhombe amakhasimende ofuna ukuwakhomba. Kubalulekile ukwazi ukuthi ungahlukanisa kanjani izimbangi zakho. Amakhasimende akho angamakhasimende akho angaba khona. Kufanele futhi wazi imikhiqizo engcono kakhulu ye-CBD. Ungaqala ibhizinisi lakho le-CBD ngokuqala inkampani yelebula yangasese.
Izinkampani ezizimele ze-CBD zingenza imikhiqizo yakho. Imikhiqizo ye-CBD ilebula yangasese yenziwa inkampani eyodwa kodwa ithengiswa ngaphansi kwegama elihlukile. Le mikhiqizo ngokuvamile yenzelwe le njongo futhi ayithengiswa ngaphansi komkhiqizo wayo. Ilebula yangasese i-Delta 8 THC imikhiqizo inezinzuzo kanye nezinzuzo ezifanayo njengezimpawu ilebula emhlophe delta 8 THC Imikhiqizo. Ungaphinda ukhethe kumabhrendi ambalwa uma ufuna inketho enezindleko eziphansi.
Ungenza futhi eyakho imikhiqizo ye-CBD, bese uyithengisa ngaphansi komkhiqizo wakho. Unenketho yokukhetha kumabhrendi ahlukene namandla. Ungakha futhi ukupakishwa kwakho kanye nomkhiqizo. Ukulebula okuyimfihlo kuyindlela yokwenza eyakho imikhiqizo ye-CBD. Ungase futhi ube nentshisekelo yokwenza awakho ama-CBD lotions noma ama-tinctures. Zombili zinezinzuzo ezifanayo. Ibhrendi yakho izokuvumela ukuthi uhlukanise umkhiqizo wakho kweminye imikhiqizo. Ukulebula okuyimfihlo kunikeza izinzuzo eziningi, okuhlanganisa nekhwalithi ephezulu, imikhiqizo yangokwezifiso ye-CBD. Kufanele ucabange ngokuthenga ama-tinctures e-CBD enkampanini eyenza Imikhiqizo ye-Bulk Delta 8 THC uma ufuna umkhiqizo ocebile nge-CBD.
Ilebula elimhlophe i-Delta 8 THC izinkampani zingaba indlela enhle kuwe yokusabalalisa imikhiqizo yakho ye-CBD kumakhasimende. Ungayethemba inkampani yelebula ezimele ukuthi ikunikeze i-CBD yekhwalithi ephezulu nenamandla aphezulu. Yize izinkampani eziningi zinikeza izinzuzo ezifanayo zemikhiqizo ye-CBD enelebula elimhlophe, kusafanele uqinisekise ubumsulwa bomkhiqizo. Ngaphambi kokuthi udle noma yiluphi uhlobo lwe-hemp extract, thintana nodokotela wakho.
Kufanele unake kakhulu ikhwalithi yomkhiqizo lapho ukhetha inkampani yelebula yangasese. Izinkampani zamalebula ezizimele zingase zingafani. Inkampani ye-CBD ngeke ithengise imikhiqizo yayo. Imikhiqizo yelebula yangasese isezingeni eliphezulu kunaleyo eyenziwe izinkampani ezingenayo ilebula yangasese. Umkhiqizi kufanele abe nomkhiqizo oqinile kanye newebhusayithi eklanywe kahle. Ungaqiniseka ukuthi umkhiqizo wakho uzophepha ukuthi ungawusebenzisa.
Izinkampani zamalebula ezizimele ziyindlela enhle uma ufuna ukwakha umkhiqizo wakho. I-Neurogen iyisibonelo senkampani enelebula yangasese. I-hemp eluhlaza eyisebenzisayo itholakala emapulazini aseCalifornia futhi icutshungulwa ezindaweni eziqinisekisiwe ze-cGMP. Lokhu kuqinisekisa ukuthi umkhiqizo uphephile. Ilebula yangasese i-Delta 8 THC imikhiqizo futhi ithengeka kakhulu kunemikhiqizo yelebula elimhlophe. Imikhiqizo eminingi ye-CBD ingathengiswa ngaphansi kohlobo olufanayo.
Uthini umbuzo wakho noma i-CBD noma umkhiqizo we-Delta 8 THC owufunayo.(uyazikhethela)
Shayela ku-425-351-1517 Ukuze Ukhulume nomeluleki namuhla!
Iba ngowokuqala lokubuyekeza "White Label Delta 8 THC Products" Khansela impendulo
isilinganiso sakho * Ukukala ... Perfect Good Isilinganiso Not ukuthi kubi Sihlupheka kakhulu
I-Wholesale Delta 9 Iyahambisana namaGummies $39.99 - $31,249.99
I-Bulk Delta 8 THC Capsules Water Soluble $29.99 - $22,499.99
I-Delta 8 THC Sleep Enhancer $29.99 - $7,499.99